C/Kariin Guuleed oo walaac ka muujiyey natiijada imtixaanka dugsiyada sare | Najah Media Network
Bogga Hore Wararka Manta C/Kariin Guuleed oo walaac ka muujiyey natiijada imtixaanka dugsiyada sare
C/Kariin Guuleed oo walaac ka muujiyey natiijada imtixaanka dugsiyada sare
Madaxweynihii hore ee Galmudug, Cabdikariin Xuseen Guuleed oo war qoraal soo saaray ayaa walaac ka muujiyey natiijada imtixaanka dugsiyada sare ee ay maanta shaacisay wasaaradda waxbarashada Soomaaliya.
Cabdikariin Guuleed ayaa ku taliyey in dib u eegis lagu sameeyo natiijadaas, maadaama ay kaalmaha hore ku soo baxeen ardayda dugsiyada sare ee ku sugan gobollada.
Halkan hoose ka aqriso qoraaalka:
1-Sida ka muuqata jaantuska natiijada imtaaxanka waxaa guud ahaan u fariistay 32,727 arday, waxaana haray/dhacay 8,550 arday, taas oo ka dhigan 25.35% celcelis ahaan. Tani waa arrin argagax leh muujineysana fashal muuqda oo ku yimid nidaamka waxbarashada ee dalka marka indho aqooneed lagu eegno .
Maqaal horeWariyeyaal caan ah oo maanta lagu xiray magaalada Garoowe
Maqaal XigaGaadiid ay Al-Shabaab qaraxyo ka soo buuxiyeen oo la bur-buriyey